ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, August 19, 2009
မြစ်ကျိုးအင်း August 19, 2009 at 4:19 PM
မြစ်ကျိုးအင်း August 19, 2009 at 4:21 PM
မှန်တာပဲ ကိုယ်ကိုတိုင်တောင် စိတ်နဲ့လူနဲ့ မကပ်ဘဲ သဟဇာတ မဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေရှိတာပဲ...။
စာကောင်းပေမွန်လေးတွေဖတ်တတ်သလို ပြန်မျှတတ် တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကိုလည်း လေးစားကျေးဇူးတင် ရပါတယ်...။
ညခင်း August 19, 2009 at 4:57 PM
အကုသိုလ်စိတ်တွေ ၀င်မလာနိုင်အောင် ကမ္မဌာန်းတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ် ၊ ဂုဏ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မေတ္တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀ိပသာနာပဲဖြစ်ဖြစ်. . ကြိုနှလုံးသွင်းထားလိုက်တဲ့ အကျင့်ကို ကျင့်ထားလိုက်ရင် ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်ရတော့ ပါ။
မိုးစက်အိမ် August 19, 2009 at 6:02 PM
ဖြစ်လေ. ဖြစ်ထ သဘာဝကြီးပါ...
စည်သူ August 19, 2009 at 10:11 PM
တစ်ယောက်တည်း တည့်အောင်နေ ဆိုပြီး တွေ့လိုက်တာနဲ့ အရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတယ်.. မဖတ်ခင်ပေါ့..
အများနဲ့တော့... မလွယ်ဘူးပေါ့ အမရယ်..
အနမ်း August 20, 2009 at 12:21 AM
ဒီပိုစ့်လေးလည်းကောင်းတယ်။ အခုလိုပြောတော့မှ ဟုတ်တာပဲ၊ လူဆိုတာတစ်ယောက်တည်းနေလည်း အကုသိုလ်ပွားနေတတ်ကြတာလေ။ ကိုယ်လည်းအတတ်
နိုင်ဆုံးအဲလို မဖြစ်အောင်နေရမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
yangonthar August 20, 2009 at 3:07 AM
အဆုံးအမ ကိုမျှဝေတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမြတ်ဆုံး ဒါနကို ဆထက်ထမ်းပို တိုးလို့ သာ ပြုနိုင်ပါစေ .....
Anonymous August 20, 2009 at 7:39 AM
သြော် _ _ _ _
ဒီမှာက တစ်ယောက်ထဲ ရန်ဖြစ်နေတာ ရှော် :D
Dream August 20, 2009 at 7:41 PM
မက်မက်လဲ ခဏခဏ ရန်ဖြတ်တယ်...သိလား
တခါတခါ ကိုယ်နိုင်တယ်.... ကိုယ်ရှုံးတာက များများနေတယ်။း(
ဧရာဝတီသား August 21, 2009 at 6:43 AM
ဟီးဟီး ဟုတ်ပ၊ တစ်ယောက်တည်း ကို တည့်ဖို့ မလွယ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်၊ ခက်တာက တစ်ယောက် တည်း မတည့်လို့ အားမရလို့ သူများတွေနဲ့ ပါလိုက်ရန်ဖြစ်နေတာ။
( အင်း အခုတော့ တရားနည်းနည်း ရသွားသလိုပဲ)
NweYoe August 22, 2009 at 4:26 PM
အင်း တစ်ယောက်တည်းမနေချင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးလေးနေချင်တယ်။ ဖြစ်ချင်တာက အေးချမ်းတာကို လိုချင်လို့ပါ။ ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လိုပဲ နေနေ၊ အေးချမ်းရင်ပြီးရော။
ရွှေပြည်သူ August 24, 2009 at 8:55 PM
ဟုတ်တယ် ညီမလေးရေ... စိတ်ဆိုတာကလည်း စက္ကန့်ပိုင်းလေး အတွင်းမှာတင် လောဘ ဒေါသ မောဟ အကုသိုလ်အားလုံးက ဝင်ပြီးသား...။ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာတွေ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမလေးလေး...
မောင်ကောင်း August 26, 2009 at 12:27 AM
အသိပေးတဲ့ စာသားလေးပါပဲအစ်မ.. အင်မတန်အကျိုးများပါတယ်.. တစ်ယောက်ထည်း တည့်အောင်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်....
ဒီလိုမျိုးဘာသာရေး အသိပေးပိုစ့်တွေ များများရေးနိုင်ပါစေ.. အစ်မ
အစ်မတစ်ယောက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် မိမိရည်မှန်းရာ ပန်းတိုင်ကို ဆိုက်ရောက်နိုင်ပါစေ...
မိုးခါး August 29, 2009 at 11:22 AM
တယောက်တည်း မတည့်တဲ့ထဲမှာ ညီမလည်း ပါတယ် .. :P